Aadaa Hojii Guddisan, Guddatan!! Ob Lammaa keenya maaltu akkana dubbisiisa laata? – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooAadaa Hojii Guddisan, Guddatan!! Ob Lammaa keenya maaltu akkana dubbisiisa laata?
Uummatni Keenya Abaarsa Qaba Laata? Damee Boruu: 11/24/2020 Waan diinni keenya nuun jedhu dhiifnee maalummaa…
Waariin Aadaa Oromoo Biyya Sweden akkas fakkaachaa ture
Waariin Aadaa Oromoo Biyya Sweden akkas fakkaachaa ture Very interesting Oromo cultural activities in Sweden,…